India: Misaona an’i Dilip Kumar, ilay ‘mpanjakan’ny tantara mampitaintaina vokarin’ny Bollywood” · Global Voices teny Malagasy
Ny anjara nolalaoviny tanatin'ireo tantaram-pitiavana no nahazoany ny lazany.
Voadika ny 31 Jolay 2021 20:49 GMT
Ilay mpilalao sarimihetsika, Dilip Kumar, miaraka amin'ny vadiny, mpilalao sarimihetsika ihany koa, Saira Banu, tamin'y 2011. Sary tao amin'ny Wikipedia, avy amin'ny Bollywood Hungama. CC BY 3.0
Marobe ireo tao India no nalahelo ny fodiamandrin'i Dilip Kumar, ilay iray amin'ireo malaza indrindra mpilalao sarimihetsika Bollywood — sady mpikambana fahiny tao amin'ny parlemanta — izay nodimandry tamin'ny 7 Jolay teo amin'ny faha-98 taonany noho ny olana ara-pahasalamana. Izy dia anisan'ireo mpilalao nalaza sady mpamokatra sarimihetsika tao anatin'ny indostrian'ny sarimihetsika indiana, niasa tamina sarimihetsika 60 mahery nandritra ny enimpolo taona, ny 1944 hatramin'ny 1999. Ny filalaony nampitolagaga dia namela fahatsapàna tsy hay hohadinoina any am-pon'ireo mpankafy sarimihetsika.
Olo-malaza iray hafa avy ao Bollywood, Amitabh Bacchan, no nanome voninahitra azy tao amin'ny Twitter:
Nikatona ho an'ny vanimpotoana iray tsy nanam-paharoa ny lamban-tsehatra…Tsy hiverina mandrakizay izy.
Dilip Kumar, izay Mohammed Yusuf Khan no tena anarany, dia teraka tamin'ny 1921 tao an-tanànan'i Peshawar, Pakistàna amin'izao androntsika izao. Nifindra ho ao Mumbai, India izy sy ny fianakaviany tamin'ny 1930. 1944 izy no nanomboka nisehatra tamin'ny sarimihetsika tao anatin'ny ‘Jwar Bhatta’ (‘Fisamonta sy Fisintonan'ny Ranomasina’), noforonin'ilay trano mpamokatra malaza Bombay Talkies. Ny mpamokatra azy io, Devika Rani, no nandresy lahatra azy hanova ilay anarany somary maneno toy ny miozolmana ho ilay iray nampalaza azy, nahasarika ireo Indiàna, izay Hindoa ny ankamaroany, hitodika any Bollywood.
Tamin'ny 1947, tonga tamin'ny famirapiratana i Kumar niaraka tamin'ilay sarimihetsika malaza ‘Jugnu‘ (‘Angamenavava’), izay nahazo fankasitrahana avy amin'ny mpanakiana. Arakaraky ny niakaran'ny lazan'ilay sarimihetsika no niakaran'ny lazan'i Kumar ihany koa. Tsy mba nijery nihemotra velively izy, lasa iray tamin'ireo mpilalao nandray karama be indrindra tao India nandritra ireo andian-taona 1950. Tamin'ny fotoana nisehoany tao anatin'ilay sarimihetsika ara-tantara malaza ‘Mughal-E-Azam‘ (‘Ny Mughal Lehibe’) tamin'ny 1960, kintana feno i Kumar, ary lasa ho iray tamin'ireo sarimihetsika nahita fahombiazana goavana teo amin'ny sehatry ny indostrian'ny sarimihetsika indiàna ilay sarimihetsika.
Nahatsiaro i Sophie Choudry, vehivavy mpilalao sarimihetsika:
Na mbola ankizivavy aza aho, natoron'ireo mpankafy fatratra an'ilay serimihetsika ahy ry Aan, Jugnu, Mughal-E-Azam, Andaz, Devdas &maro hafa. Ho anay, iny no sarimihetsika teo amin'ny tampon'ny laza & izy no ilay famirapiratàna tsy misy fangarony tao anaty efijery. Tsy hisy intsony 💔🤲🏼 #DilipKumar iray hafa #mpanjakanNysinema #olomalaza #faranNyvanimpotoana
Neken'ny rehetra ny filalao tsy nisy tomikan'i Kumar. Tamin'ny 1954, azony tamin'ny alàlan'ilay sarimihetsika ‘Daag’ (Ilay Pentina) ny loka Mpilalao Tsara Indrindra fanomen'ny gazetiboky Filmfare. Im-pito izy no nahazo io loka io nandritra ny fotoana niasàny.
Tamin'ny alàlan'ny fandefasana fampitambatambarana sary nahitàna azy tanaty fiarahan'olon-droa nalaza tamin'ny fahitalavitra no nentin'ny Filmfare nahatsiarovana azy:
Niaraka tamin'ny asany sy ny hatsaràny, lasa tsy hay hadinoina koa ireo fisehoan'i #DilipKumar tamin'ny efijery. Soritanay ny momba azy sy ny sasany tamin'ireo vehivavy mpitarika tsara indrindra niaraka taminy.
‘Mpanjakan'ny Tantara Mampitaintaina’
Kumar dia nahazo ny anaram-bosotrany noho ny anjara noraisiny tany anatin'ireo tantaram-pitiavana marobe mahavaky fo teo anelanelan'ny andian-taona 1940s sy 1950s, ka tao anatin'ireny ny olona nolalaoviny dia niafara tamin'ny fahafatesana na famoizana nampahonena ny fiheverany ny fitiavana.
Pôlitisiana iray avy amin'ny antoko Bharatiya Janata, Amitava Chakravorty, nibitsika hoe:
Hany mpilalao sarimihetsika nahavita nilalao tanaty sarimihetsika betsaka indrindra ary lasa goavana
Kanefa ny lazan'i Kumar dia tsy nijanona fotsiny tamin'ny asany ho an'ny sarimihetsika; nitazona andraikitra goavana ho an'ny fiarahamonina ihany koa izy. Tany amin'ny taona 1950s, ohatra, fony India nisedra safotofoto henjana, indrindra fa ny fihenjanan'ny fifandraisan'ny Hindo-Miozolmàna, aingampanahy avy amin'i Kumar no niteraka ny fahatsapana fivondronana / fiaraha-mientana tao anatin'ilay India taorian'ny fahaleovantena, nanampy ireo olompirenena hahita ny tany ambadik'ireo sakàna fahiny momba ny maripamantarana ara-pinoana.
Izy ihany koa no teny amin'ny lohany nitarika ireo hetsika sôsialy marobe sy asa fanasoavana, nanao adisisika ho an'ny tsy fivakisan'ny firenena sady nanokatra ny hetsika fanangonambola ho an'ny Tafika Mitam-Piadiana Indiàna. Angamba ny malaza indrindra, talohan'ny fahaleovantenan'i India tamin'ny 1947, dia ny tantaran'ilay mpilalao an-tsehatra — mpanohana mahafatra-po ny tolona fikatsaham-pahalalahana ho an'i India — nandany alina iray tany am-pigadràna noho ny nitenenany nanohitra ireo manampahefana britanika noho ny fampiasàna tsy ara-dalàna ny herin-dry zareo.
Avy eo, tsy nahagaga raha niditra nanao pôlitika i Kumar. Tamin'ny taona 2000, izy no voatendry ho Rajya Sabha (Kaonsilim-panjakàna), mpikambana ao amin'ny parlemanta avy amin'ny Kaongresy Nasiônaly Indiàna. Nandritra ny taona enina fe-potoana niasàny, ny fanorenana sy fanatsaràna ny Bandstand Promenade tao amin'ny faritra Bandra ao Mumbai no nandaniany fotoana betsaka.
Fahatsiarovana ilay olomalaza
Na tao an-tanindrazany na tany ivelany, samy nanome voninahitra an'i Dilip Kumar avokoa ireo mpampiasa media sôsialy. Ilay Indiàna mpilalao fantadaza, Shabana Azmi, nibitsika hoe:
Ny filalaovana sarimihetsika tsy toy ny hazakaza-tsoavaly ka hoe izay mandeha haingana indrindra no tsaraina ho ny tsara indrindra. Ny Othello iray mampiasa ny fahefàny dia mety ho ny Hamlet iray mitera-doza, ka araka izany, fomba ahoana no hahafahanao mitsara olona iray ho mpilalao tsara? Amin'ny fahaizany manavia manavanana, ary mety tsy hisy velively #DilipKumar iray hafa. Na tantara mampitaintaina, na fampihomehezana, faratampony izy.
Melanie Greenberg, monina ao Chicago, mitantana fantsona YouTube iray izay mitantavana ireo sarimihetsika indiàna, nibitsika hoe:
Mijery ny Yahudi aho amin'izao fotoana izao. Dilip Kumar mitafy yarmulke iray sy sabatra fitondra miady. Ry foko, mitonia! 😍😍
Ny praiminisitra taloha tao Nepal, Baburam Bhattarai, nahatsiaro fa nitàna ampahan-toerana be tao anatin'ny fahatanoràny ireo sarimihetsika nolalaovin'i Kumar :
Ny fanomezam-boninahitra tena avy ao am-poko ho an'ilay mpilalao malaza, Dilip Kumar (Yusuf Khan), amin'izao famoizana azy mampalahelo izao. Tsy ho adinoko velively ireo androm-pitiavana tany amin'ny 1970s tao amin'ny Chandigarh College of Architecture fony izahay zatra nameno ny efitrano fijerena sarimihetsika sy ireo teatira ankalamanjàna mba hihanoka ireo sarimihetsika nolalaoviny, toy ny Mughal-E-Azam sy ny hafa maro.
Raha jerena ny toerana nahaterahany, Kumar koa dia — tena sahaza azy mihitsy — nalaza tao Pakistàna, toerana izay misy ireo mpankafy misaona ny fahafatesany ihany koa. Tamin'ny 1998, i Dilip Kumar no lasa Indiàna tokana sy voalohany nahazo ny Nishan-e-Imtiaz, loka ambony indrindra fanome ny sivily ao Pakistàna.